Ungayithola Kanjani Ukulahleka Kokulahleka Kwedatha ye-iPhone nge-iPhone / iOS Idatha Lokubuyisela (i-2018Update)
[Pro] Ungayibuyisa Kanjani Ukulahleka Kwedatha ye-iPhone nge-iPhone / iOS Data Recovery
Nge-iPhone, sixhumana nabangane bethu, sizigcine siku-inthanethi futhi sibuyekezwa ngezindaba zakamuva. Ngenkathi ukulahleka kwedatha kwe-iPhone kwenzeka ngenxa yezizathu ezithile ezifana ne-iPhone yakho kulimele, kubiwe, Breakbreak noma ithuthukisiwe ngaphandle kwesipele, udinga ukwenza okuthile ukuyilungisa, ngoba unedatha ebaluleke kakhulu lapho.
Omunye angahle azibuze: Ngabe i-iTunes ingangibuyisela idatha ye-iPhone elahlekile?
Impendulo ithi, akunjalo Empeleni.
Ukulinganiselwa kwe Ukubuyiselwa Kwe-iTunes
Njalo lapho uxhuma i-iPhone ne-iTunes, izokwenza isipele amafayela akho kufaka phakathi konke okuqinisekile. Kepha kuthiwani uma idatha elahlekile ingazange igcinwe kumafayela akho wesipele? Kuthiwani uma une-iPhone yakho jailbreak futhi kukhona okungahambi kahle? Futhi kuthiwani uma nje udinga ukuthola ingxenye yedatha? Kulezi zimo, udinga ithuluzi elikwazi ukubuyisa idatha ngqo kusuka kudivayisi yakho ye-iPhone futhi ongabheka ngayo kuqala idatha elahlekile bese ukhetha labo ofuna ukulilulama.
Ukubuyiswa kwedatha ye-iPhone / iOS
Nokho, noma yini abantu abayidingayo, bayayisungula. Manje nakhu kufika Isoftware yokubuyisa idatha ye-iPhone. Ungalulama Izithombe, videos, oxhumana nabo, imiyalezo, ucingo lwamakholi, imisindo yezwi, ikhalenda, amanothi, izikhumbuzi kanye amabhukumaka ngokuchofoza okumbalwa. Yebo, cishe yonke into eku-iPhone yakho.
Landa i-iOS Data Revenue MAHHALA Manje!
Thenga i-iOS yedatha Ukubuyiselwa Manje!
Phinda usebenzise amakhalenda we-iPhone, Imilayezo, Oxhumana Nabo, Izithombe, Idatha Yohlelo Lokusebenza, Inothi nokuningi. Funda kabanzi.
Engxenyeni elandelayo, ngizokukhombisa ukuthi ungayithola kanjani kabusha idatha kusuka ku-iPhone ngaleli thuluzi. Okokuqala, Yebo, udinga ukufaka isoftware. Kunemodi emithathu yokutakula ongayikhetha, sizoyichaza ngokulandelana.
Izindlela Zokubuyisa Idatha Elahlekile ye-iPhone nge-iPhone Data Recovery:
Phinda uvule idatha ye-iPhone kusuka kudivayisi ye-iOS nge-iPhone / iOS Data Recovery
Phinda Ubuyisele Idatha ku-iTunes kusuka ku-iTunes Backup nge-iPhone / iOS Data Recovery
Phinda uvule idatha ye-iPhone kusuka ku-iCloud Backup nge-iPhone / iOS Data Recovery
1 Phinda uvule idatha ye-iPhone kusuka kudivayisi ye-iOS nge-iPhone / iOS Data Recovery
Ngemodi "Thola kusuka kudivayisi ye-iOS", unelungelo lokuthola kabusha idatha ye-iPhone kusuka kudivayisi ye-iPhone ngqo. Isoftware izocubungula i-iPhone yakho ukuthola imininingwane elahlekile ebangelwe ukususwa ngephutha noma ezinye izizathu.
Ngaphambi kokuthi siqale, sicela uqinisekise ukuthi i-iTunes yakamuva ifakiwe futhi ayikhanyiswanga.
Isinyathelo 1 Qalisa Ukubuyiselwa Kwemininingwane Yedatha kwikhompyutha yakho bese uxhuma i-iPhone yakho.
Isinyathelo 2 Thepha ukuze Themba le khompyutha kwi-iPhone yakho.
Isinyathelo 3 I-iPhone yakho izotholwa ngokuzenzakalelayo futhi uma kunesidingo sakho uzobona ukungena Imodi ye-DFU Imiyalo esesikrinini, vele ulandele izinyathelo eziya faka i-iPhone kumodi ye-DFU.
Isinyathelo 4 Khetha ku Thola kusuka kudivayisi ye-iOS bese uqhafaza ngaphezulu Qala Scan, bekezela lapho kuqhubeka ukuskena nokuhlaziya.
Isinyathelo 5 Yonke imininingwane ye-iPhone izohlelwa ngezigaba futhi uzobona uhlu lwefayela lekhohlo ngakwesokunxele. Khetha lezo zinto ofuna ukuzilulama bese uchofoza ngaphezulu Buyisela.
2 Phinda Ubuyisele Idatha ku-iTunes kusuka ku-iTunes Backup nge-iPhone / iOS Data Recovery
Buyisela i-iPhone nge-iTunes inqubo elula njengoba sishilo ngenhla. Uma ungafuni idatha yakho entsha ibhalwe ibhekhaphu yomdala noma umane nje uqinisekise ukuthi isipele esisodwa se-iTunes siqukethe idatha oyilahlekile noma oyisusile. Ngemuva kwalokho kufanele uzame "Phinda usebenzise i-iPhone kusuka ku-iTunes". Le modi yokubuyisela ivumela ukuthi uphinde uthole idatha yakho yangaphambilini ngokukhipha amafayela kwisipele se-iTunes. Ungasebenzisa le modi yokutakula ukuthola idatha yakho yangaphambilini ohlulekile ukuyithola ngqo kusuka kudivayisi yakho ye-iOS, noma icala ukuthi i-iPhone yakho intshontshiwe. .
Isinyathelo 1 Qalisa Ukubuyiselwa Kwemininingwane Yedatha kwikhompyutha yakho. (Qinisekisa ukuthi unayo Isipele se-iTunes kule khompyutha futhi i-iTunes ifakiwe futhi ayethulwanga.)
Isinyathelo 2 Iya ku Thola i-iTunes Backup File bese ukhetha ibhekhaphu ye-iTunes equkethe idatha ofuna ukuskena.
Isinyathelo 3 Ngemuva kokuskena, thinta lezo zinto ozifunayo bese uchofoza Buyisela.
3 Phinda uvule idatha ye-iPhone kusuka ku-iCloud Backup nge-iPhone / iOS Data Recovery
Phinda uthole idatha elahlekile kusuka ku-iCloud iyindlela ehlukile yokuthola idatha ye-iPhone. Uma une isipele i-iPhone yakho nge-iCloud, uzothola idatha yakho nge ukukhipha idatha ku-iCloud Backup.
Isinyathelo 1 Qalisa Ukubuyiselwa kwedatha ye-iOS bese ukhetha Buyisela (Phinda uthole idatha kusuka kufoni yakho), Khetha Thola i-iCloud Backup File.
Isinyathelo 2 Sayina i-iCloud nge-ID yakho ye-Apple. Uyacelwa ukuthi ungaxhumi i-iPhone kwikhompyutha yakho ngesikhathi senqubo yonke.
Isinyathelo 3 Landa iCloud Backup efanele bese uqala ukuskena ifayela eliyisipele. (Kuzothatha imizuzu yokulanda)
Isinyathelo 4 Bheka kuqala zonke izinto ezifakwe kuhlu bese ukhetha lezo ezidingekayo ukuze ziphinde zithole, Chofoza Buyisela (uma uxhumekile ku-iPhone yakho, ungakhetha ukubuyela kudivayisi).
Ungabuyisa Kanjani Izithombe Ezisusiwe kusuka ku-iPhone
Ungabuyisa Kanjani amavidiyo asusiwe kusuka ku-iPhone
Ungabuyisela Kanjani Oxhumana Nabo ku-iPhone / Ucingo lwe-Android
Ungayibuyisela kanjani Imiyalezo Yombhalo we-iPhone kusuka ku-iCloud
Phinda ususe umlando we-Call on iPhone kalula
Ungawabuyisa Kanjani amanothi kusuka ku-iPhone / iPad / iPod Alahlekile noma Ayisusiwe